Habibiana teny Ambohibao : sady naolana no novonoina ilay vadina pasitera | NewsMada
Ny vatana mangatsiakany feno ratra, nitafy tapaka sisa hita teo anelakela-pasana, teny amin’ny manodidina ny fiangonana FLM Ambohibao, ny tolakandron’ny alahady teo. Tsy vitan’ny hoe naolana fa mbola novonoina sy nalatsaka aina ity ramatoa vadina pasitera ity.
Nokendaina tamin’ny tady, avy eo naolana ary novonoina, izay ny fomba nanaovan’ireo olon-dratsy ny renim-pianakaviana iray, antsoina hoe Ranorovao Hélène, tonian’ny fikambanam-behivavy loterana ao amin’ny Fiangonana Loterana Malagasy(FLM) Ambohibao rehefa avy namita ny iraka tao am-piangonany, ny alahady teo. Raha ny fanazavan’ny zandary mpanao famotorana, ny alahady tolakandro teo, tokony ho tamin’ny 02 ora latsaka fahatelony teo no nahitana ny vata-mangatsiaka an’io vadina pasitera misotro ronono io, teo anelakela-pasana, manakaiky ny fiangonana FLM Ambohibao teny ihany.
Niboridana tanteraka ny tapany ambanin’io ramatoa 63 taona io tamin’ny nahitana azy. Tsikaritra tamin’izany ihany koa fa nisy ratra teo amin’ny vavany ary tsy teny aminy intsony ny poketrany izay nisy ny baiboly sy ny kojakoja maro samihafa. “Hita teny amin’ny tendany ihany koa ny tady iray. Tsy irony karazany matevina ireny fa ilay somary kelikely”, hoy hatrany ny zandary ao an-toerana. Voamarina taorian’ny fizahana nataon’ny mpitasabo fa nanamparan’ireo olon-dratsy ny filan-dratsiny ilay renim-pianakaviana ka novonoin’izy ireo avy eo. Nambarany ihany koa fa nikija tanteraka ny orana tamin’ny fotoana nahitana io vehivavy io ka voafafa tao anatin’izany ny “indice” rehetra momba ilay tranga. Tsy ho sakana amin’ny famotorana anefa izany fa efa misokatra ny fanadihadiana ny tranga, hoy hatrany ny zandary ao an-toerana. Fantatra hatreto fa tsy mbola misy ny olona ahina nanao ny asa ratsy ary ts mbola nisy ny voasambotra amin’izany.
Tokony ho tamin’ny 01 ora sy 15minitra tolakandro teo no nivoaka ny fiangonany i Ranorovao Hélène rehefa avy nandika teny tamin’ireo Norvezianina tonga tao am-piangonany. “Hamonjy ny fotoana nifanarahany tamin’ireo namany sy ny fianakaviany kosa izy avy eo ka notafihin’ny jiolahy”, hoy ny Dr Pasteur Rakotonirina David, Filohan’ny fiangonana FLM sady filohan’ny FFKM. Nambarany fa teo am-pandalovana ireo fasana maromaro teo an-toerana izy no nosamborin’ireo jiolahy sy nanaovany ny asa ratsiny.
Fantatra tamin’izany fa hamonjy fivoriam-piangonana eto an-drenivohitra io renim-pianakaviana monina eny Ambohibao io ary hamonjy ireo namany teny amin’ny fiara hiraisan’izy ireo izy tamin’izany. Niandry azy hatrany anefa ireo namany, ary tapa-kevitra ny hitady azy. Efa nofo mangatsiaka anefa no novantanin’izy ireo rehefa nahita io renim-pianakaviana io teo anelanelan’ireo fasana teny Ambohibao. Tsy nampilaza ny manam-pahefana ireto farany, hoy ny zandary. Efa natolotra ny fianakaviany eny Ambohibao ihany ny vata-mangatsiakany taorian’ny fizahan’ny mpitsabo.
Araka ny fantatra, voina faharoa natao tamina vehivavy manan’andraikitra eo anivon’ny fananan-tanin’ny FLM io nitranga io ka miantso vonjy amin’ny fitondram-panjakana ny fiangonana hampanjakana ny fandriam-pahalemana, hoy hatrany ny filohan’ny FFKM.